Iindaba Ezilungileyo Zifikelela Nakoomatiloshe
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBasque IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiCatalan IsiChichewa IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGalician IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMyanmar IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiPunjabi IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTahiti IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiValencian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba
Kuqikelelwa ukuba kukho isigidi esinesiqingatha soomatiloshe ehlabathini lonke. Ekubeni aba matiloshe besiya kumazibuko ahlukahlukeneyo, amaNgqina KaYehova anokubafikelela njani ngesigidimi seBhayibhile? Xa inqanawa ifika ezibukweni, amaNgqina aqeqeshiweyo aye acele ukungena aze afundise abantu abalapho iBhayibhile aze abanike neencwadi ngeelwimi abazikhethayo.
Baye basabela njani? UStefano, iNgqina elilivolontiya kwizibuko laseVancouver, eKhanada, uthi: “Abanye abantu bacinga ukuba bonke oomatiloshe banenkani. Nangona abanye kusenokuba banjalo, uninzi loomatiloshe esidibana nabo bathobekile ibe bayakufuna ukufunda.” UStefano wongezelela athi: “Uninzi lwabo luyakholelwa kuThixo ibe luyakufuna ukusikelelwa nguye, ngenxa yoko amaxesha amaninzi bayasamkela.” EVancouver kuphela, phakathi kukaSeptemba 2015 noAgasti 2016, amaNgqina KaYehova aye amkelwa kwiinqanawa kangangezihlandlo ezingaphezu kweziyi-1 600! Oomatiloshe baye bathatha amawakawaka eencwadi ngeelwimi ezininzi, ibe kuye kwafundwa iBhayibhile nabangaphezu kwabayi-1 100.
Kuqhubeka njani kuncokolwa ngeBhayibhile noomatiloshe?
Ngenxa yokuba amaNgqina esenokufumaneka kuwo onke amazibuko asehlabathini lonke, oomatiloshe abafuna ukuqhubeka bencokola ngeBhayibhile banokucela ukuba batyelelwe kwizibuko elilandelayo. Ngokomzekelo, ngoMeyi 2016, xa amaNgqina KaYehova ayeseVancouver adibana noWarlito, ongumpheki kwinqanawa. Ambonisa ividiyo ethi, Kutheni Ufanele Ufunde IBhayibhile? aza aqalisa ukufunda iBhayibhile kunye naye esebenzisa incwadana ethi, Iindaba Ezilungileyo Ezivela KuThixo! UWarlito wayekuvuyela ukutyelelwa ngawo ibe wayekufuna ukuqhubeka efunda iBhayibhile, kodwa izibuko elilandelayo inqanawa eyayiza kumisa kulo laliseBrazil eParanaguá.
Ekufikeni kwenqanawa eParanaguá, kancinane nje emva kwenyanga, uWarlito wothuka xa amaNgqina amabini aseBrazil eza enqanaweni aze ambiza ngegama! Athi amaNgqina aseVancouver awaxelela ukuba ufuna ukutyelelwa. UWarlito wakuvuyela kakhulu ukudibana nala maNgqina aseBrazil ibe wabulela ngamalungiselelo enziwayo. Wavuma ukuqhubeka efundelwa iBhayibhile ngamaNgqina nakwizibuko elilandelayo awayeza kuya kulo.
Ukubhengeza I-JW.ORG Kwiphulo Lokubhengeza Iincwadi EToronto
Iitroli Zeencwadi Ezingaphezu Kwe-165 000